Chawomel (T3) uzuzu (55-06-1) hplc ma98% | AASraw Fat Loss ntụ ntụ
T3 (Cytomel) ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Ihe nkuzi / Cytomel (T3) ntụ ntụ
Rating: SKU: 55-06-1. Category: Ihe nkuzi
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram na usoro nchịkọta nke Cytomel (T3) (55-06-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Cytomel (T3) uzuzu uzuzu
Cytomel (T3) ntụ ntụ Characters
aha: Cytomel (T3) ntụ ntụ
Usoro Molecular: C15H11I3NNaO4
Molekụla arọ: 672.96
Cytomel (T3) ntụ ojiji
Cytomel ntụ ntụ aha
A na-akpọkwa Cytomel ntụpụ (CAS 55-06-1) dịka Cytomel, Cynomel, Cyronine, Cytomel Tabs, Euthroid, Linomel, Liothyronin, Neo-Tiroimade, Ro-Thyronine, T3 ntụ ntụ, Tertroxin, Thybon, Ti-Tre, Tiromel, Tironina , na Trijodthyronin.
T3 ntụ ntụ Usage
T3 ntụ ntụ anaghị adịkarị edepụtara n'onwe ya iji dozie nsogbu thyroid; a na-ekenyekarị ya na T4. N'oge gara aga, cytomel bụ usoro ọgwụgwọ maka oke ibu; Otú ọ dị, mmụba nke nsogbu obi na nrụgide obi na-amanye iwepụ T3 maka ngwa ahụ.
T3 na-arụ ọrụ n'ogo ụlọ ndụ site n'ịbawanye metabolism nke protein, carbohydrates, na abụba, nakwa dịkwuo oke obi na ọbara. T3 bụ ezigbo ọkpọ abụba ebe ọ bụ na ịmalite ịmalite ịmalite ịba ụba ka ị na-eji ya eme ihe.
Nke a na-erite uru bodybuilders na ha nwere ike imeli ka ha nwee nri calorie dị elu tupu asọmpi ebe ọ bụ na ha ga-ere calorie buru ibu na ọnụ ọgụgụ kachasị elu. Ma cheta, T3 bụ catabolic (ị nwere ike ịhapụ oke ahụ ike) na iji ogologo oge mee ihe nwere ike belata oke ọkpụkpụ.
Cytomel (CAS 55-06-1) kachasị mma were ọtụtụ oge n'ụbọchị. Etoju nke T3 ga-agbatị elu elekere 2 awa mgbe ingestion ga - agwụ n'ime 4 awa. Iji bulie nnweta T3 na mmezi nke T3 ọkwa ụbọchị niile, ị -ụ ọtụtụ ọgwụ bụ usoro a tụrụ aro.
Ngwakọta dị iche iche na-ezere inwe nkwado zuru ezu na ahụ gị na-agbanwe T4 ka T3.
Ọ bụ ezie na T3 abụghị onye steroid, e nwere ụfọdụ ihe àmà na-egosi na T3 na-eme ka steroid dịkwuo elu. Nke a nwere ike ikwe omume n'ihi ụba nke protein metabolism mgbe ị na-eji T3.
Ị na-agụkarị banyere bodybuilders stacking T3 na usoro anabolic steroid okirikiri. Tụkwasị na nke ahụ, clenbuterol bụ ngwaahịa ọzọ nke T3 na-emekarị ka ọ bụrụ nke dị irè, tupu ịlụ ọgụ na-efu.
Ọtụtụ bodybuilders ejirila ọgwụ a n'enweghị nsogbu. Enwere akụkọ banyere ndị nwere nsogbu na thyroid gland "na-emechi" mgbe ojiji T3. Site na nyochaa akwụkwọ, ọ na-egosi na mgbake bụ ihe omume nwere ike ime, ma ọ bụrụ na enweghi mkpụrụ ndụ ihe nketa maka ọrịa thyroid.
Ịdọ aka ná ntị na Cytomel ntụ ntụ
Supplementation akpan akpan maka thyroid nkwado bụ ọzọ okwu. Edeela ọtụtụ ihe na hyped banyere guggulsterones na mgbagwoju anya. Akwụkwọ ndị ahụ na-akpali akpali mmepụta ọgwụ gị maka ngwaahịa abụọ ahụ, Otú ọ dị, usoro (s) kpọmkwem nke arụmọrụ adịghị edozi.
Ọtụtụ ihe mgbapụta ọnwụ na-eji ma ọ bụ abụọ ngwaahịa.
Onwe m, m kwenyere na ha na-emepụta naanị ntakịrị iji mee ka nrụrụ gị dịkwuo mma nakwa na ọkọlọtọ nke usoro ọgwụgwọ nke thyroid na-eme ka ọtụtụ uru ndị a pụrụ inweta. Otú ọ dị, ha nwere ike ịnwe ezigbo ọrụ na mgbatị gịroid mgbe ị gbasịrị T3.
A gha-atụle mkpuru hormone (GH) na T3 n'otu oge. A na-ewepụ njigide dị mma na njigide nitrogen nke ejiri GH mee ihe mgbe a na-ewepụ T3 ọkwa.
Ebuwo mmetụta a na T3 (CAS 55-06-1) nke insulin na-aba ụba dị ka ihe na-eme ka protein jikọta, si otú a na-ebelata bioavailability nke igf-1 (5). Mkpụrụ hormone nke na-eto eto enweelarịrị abụba na-ere ọkụ na ya, yabụ o yiri ka ọ dị ọnụ ala karịa ịghara iji T3 na GH n'otu oge.
T3 ntụ ntụ ntụziaka ndị ọzọ
Cytomel bụ ọgwụ na-egbu ọgwụ nke a pụrụ iji mee ihe n'ụzọ dị mfe iji belata oke flab si n'ahụ mmadụ. N'eziokwu, ọ na-arụ ọrụ site na dochie ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa thyroid. Cytomel T4 na-eme ka ọnụọgụgụ nke onye ọrụ ahụ dịkwuo elu ma na-enye ume dị ukwuu maka ịkụ nri. Mgbe a na-eme ya mgbe nile, steroid na-enyere onye aka ibelata iji belata ibu ya na-enye aka iji nweta ahụ ike.
Anyị nwere ike ịhụ nke ọma na enwere ọtụtụ uru site n'iji Cytomel iji mee ka ọnụ ọgụgụ nke metabolic dị elu. Ọ na-eme ka ikike nke ahụ dịkwuo ike iji synthesize protein. Ma ihe a na-ahụkarị bụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ catabolic mgbe a na-ejighị ya na steroid anabolic.
Ọ na-abụkarị ihe ikpeazụ esonyere na nri nri tupu ịlụ ọgụ n'ihi na ọ nwere aha ọma maka ịhapụ abụba abụba ma ọ bụ abụba dị egwu nke a na-akpọ na-arụ ọrụ n'ahụ. Ọ bụ abụba nke na-achọghị ịhapụ gị na ụbọchị ole na ole gara aga. Cytomel na-eje ozi na-ewu ewu n'etiti ndị inyom bodybuilders. Dika umunwanyi si eme ngwa ngwa dika ndi mmadu, o siri ike nke oma ka ha nweta uzo ziri ezi maka mpi, nyere ha iwu taa. Enwere ike izere nnukwu calorie na nri n'okpuru 1000 calorie / ụbọchị site na iji Cytomel. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ụmụ nwanyị na-enwekarị ike imeri mmetụta nhụsịrị karịa ụmụ nwoke ma ha na-emekọrịta ihe banyere 50 mcg kwa ụbọchị. Ọ ka dị mkpa ka a ghara ịṅụ ọgwụ ahụ maka izu 6 ma ọ bụ karịa. Ọ dịkarịa ala ọnwa 2 abughi na Cytomel chọrọ ka esoro ya. Ndị mmadụ na-ewere usoro ọgwụgwọ dị elu n'ogo ogologo oge na-atụ egwu ịmalite ịmalite ịrịa ọrịa na-adịghị ala ala.
N'ọgbakọ ahụ na-ewu ahụ, a na-eji Cytomel mee ihe dịka ọgwụ ọjọọ. A na-ezo aka na hormones thyroid dịka ndị na-achịkwa ahụ. T3 dị elu gbagọrọ agbagọ nke onye ahụ, si otú a na-enye ya ohere ịkụkwuo calorie na iji calorie mee ihe n'ụzọ zuru oke.
N'ikwu okwu banyere usoro onunu ogwu, onye kwesiri ikpacha anya dika Cytomel bu horroone siri ike. Ọ dị oké mkpa na onye na-amalite na obere dose, na-amụba otu nwayọ na nke ọma na ụbọchị nke ụbọchị ole na ole. Imirikiti ndị na-eme egwuregwu na-amalite site n'iji 1 25mcg taabụ kwa ụbọchị ma na-amụba mkpụrụ ọgwụ ọ bụla nke 3 gaa na 4 ụbọchị site na 1 mbadamba ụrọ. Ụfọdụ onyonyo elu karịa 100 mcg kwa ụbọchị adịghị mkpa dị ka ndị dị otú ahụ ma ọ bụ ọbụna ihe dị mma.
T3 ntụ ntụ ntụ ntụ
Cytomel ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Cytomel ntụ ntụ: zụta T3 ntụ ntụ (CAS 55-06-1) si AASraw